PRINCE2 Shahaadada: Hage Dhameystiran - Iskuulka ITS Tech
PRINCE2 Shahaadada: Hage Dhammaan
PRINCE2 waa qayb gaaban oo loogu talagalay Mashaariicda Meelaha la Xakameynayo. Waa nidaam maareynta mashruuc oo ku habboon oo kuu ogolaanaya dhammaan mabaadi'da maareynta mashruuca si guul leh. Ugu horreyntii waxaa loogu talagalay degaannada IT-da oo keliya, laakiin waxay daboolaysaa dhammaan noocyada mashaariicda iyo qaybaha kale ee warshadaha si caddaalad leh. Asal ahaan, marka la sii daayo 1996, waxay ahayd habka maaraynta mashruuca guud laakiin hadda waa heer caadi ah ee maareynta mashruucyada inta badan waaxyada dawladda Ingiriiska iyo ganacsiyada gaarka loo leeyahay. PRINCE2 waxay astaan ​​ahaan xoogga saareysaa mashaariicda u qaybinta maareynta marxalado badan oo la maarayn karo oo marin leh. Shahaadooyinka PRINCE2 ayaa kaa caawin kara kobaca shaqooyinka
2013, xuquuqda lahaanshaha ee PRINCE2 ayaa laga soo wareejiyay xafiiska Wasaaradda Shaqaalaha ee HM AXELOS Ltd (oo lahaanshaheeda la wadaago inta u dhaxeysa Wasaaradda Xukunka iyo Capita plc).
Shahaadada PRINCE2 - Hage Dhammaan
TALLAALKA I - PRINCE2 Foundation Training
TALLAABADA II - Tababar Tababar Tababare PRINCE2
Haddii aad tahay qof xiiseynaya doorka maaraynta mashruuca, ka dibna shahaadada PRINCE2 xaqiiqdii waxay kaa caawin kartaa kobaca xirfadda. Shahaadadani waxay ku lug leedahay laba tallaabo: Dhakhtarka PRINCE2 iyo PRINCE2. Koorsada shahaadada tababarka PRINCE2 waxay kuu diyaarin kartaa labadiinaba waxayna sidoo kale ku ogaaneysaa heerka caadiga ah ee hadda socda aduunka. Inta lagu jiro tababbarka koorsada, mid ayaa hela khabiir ku saabsan habraaca maareynta mashruuca iyo hababka ugu fiican ee heerarka PRINCE2.
PRINCE2 waa hab maareyneed mabaadi'da maareynta maareynta mashruuca. Waxay ka kooban tahay toddoba mabda ', toddoba mawduuc iyo toddoba habab.
MAWDUUCA: Mawduucyada waa qayb muhiim ah oo ka mid ah mashruuc kasta, kaas oo ah in si joogta ah looga hadlo oo lala xiriiriyo haddii fulinta mashruuc waa in uu guuleysto. Toddoba mawduuc waa:
PRINCIPLES: Maareynta Mashruuca waxay ku lug leedahay todoba mabda 'oo ah nidaam guud oo wanaagsan oo loo adeegsan karo mashruuc kasta. Toddobada mabda 'waa:
Caddaynta Ganacsi ee Wali Socota
Doorarka iyo Mas'uuliyadaha la qeexay
Maaraynta ka reebista
Xooga saar Qalabka
U diyaarsan in la suubiyo bay'ada mashruuca
NIDAAMKA: Toddoba geeddi-socodka ayaa ah talaabooyin muhiim ah oo loo baahan yahay in lagu maareeyo, loona hagaajiyo mashruuca si guul leh. Toddoba hababka ayaa ka kooban:
Laga bilaabo mashruuc
Maareynta Sheyga Qalabka
Maareynta Xuduudaha Marxaladda
Mabaadiida kor ku xusan iyo mawduucyada waxay ku khuseeyaan todobada hab eeas.
Sababaha ugu muhiimsan ee aad ugu baahan tahay shahaadada PRINCE2?
Si aad uga faa'iidaysato tartan ka dhexaysa asxaabtaada- Helitaanka shahaadada PRINCE2 waa xaqiijinta awoodaada sida xirfadlaha maareynta mashruuca iyo kartidaada aad u adeegsan karto hababka PRINCE2.
Aqoonsiga aqoontaada, xirfadahaaga iyo awoodahaaga - Waa qadarin ku salaysan xirfad maareynta mid ka mid ah xirfadaha mashruuca ee heer caalami ah.
Hibo - Shahaadada PRINCE2 waxay muujinaysaa kartida qof ahaaneed ee hoggaamiye maareyn ah mashruuca mashruuca.
Fursadaha shaqo ee wanaagsan iyo dakhliga weyn - Diiwaangelintan, waxaad awood u yeelan doontaa inaad sahamiso fursado shaqo oo ka fiican. Kuwa haysta shahaadada waxay sidoo kale filan karaan kor u kaca mushaharka sare.
Horumarinta Xirfadda- Helitaanka shahaadada PRINCE2 waxay ka tarjumeysaa diyaargarowgaaga inaad qaadato masuuliyad weyn oo shaqo.
Hagaajinta aqoonta iyo xirfadaha-Diyaarinta PRINCE2certification waxay kaa dooneysaa inaad barato oo dib u eegto hababka maamulka iyo tiknoolajiyada hadda loo isticmaalo. Tani waxaa lagu muujiyay shahaadada aad shaqeysato.
Kordhinta kalsoonida- Iyada aqoonta, kartida, xirfadaha iyo soo dhaweynta warshadaha, waxaad dabiici ahaan u dhistaa dareen isku kalsooni ah isla markaana diyaar u noqotaa in aad qeexdo naftaada shaqo ka baxsan.
Arag sidoo kale: Fursadaha Xirfadda Shaqaalaha ee Sayniska PMP
TALLAABADA I - Tababarka PRINCE2
Tababarka PRINCE2 Foundation wuxuu xoogga saaraa aragtida. Ku qanacsanaanta aragti ayaa hubinaysa in musharaxa uu dareemayo kalsooni marka uu sameynayo waxqabad dhab ah ee barashada PRINCE2 ee arena xirfad leh. Mabaadi'da, mawduucyada iyo hababka waa in si faahfaahsan loo fahmo.
Imtixaanka aasaasiga ahi wuxuu qiimeeyaa musharax asaasi ah / awoodiisa ah inuu u dhaqmo sidii xubin lagula socodsiiyo kooxda maamulka mashruuca iyadoo la adeegsanayo PRINCE2. Bixinta imtixaanka wuxuu ansixiyaa fahamka musharraxa ee eraybixinta PRINCE2, mabaadiida, mawduucyada iyo hababka.
Marka la dhammeeyo tababarka saldhigga, xirfadlaha ayaa si guul leh u samayn kara waxyaabaha soo socda:
Kordhinta ujeedka iyo ujeedada dhammaan doorarka mid kasta oo ka mida toddobada mawduuc, mabaadiida iyo habraacyada.
Go'aaminta mashaariicda maareynta miisaaniyadu waa talobixin iyo / ama ka soo baxa geeddi-socodka toddoba.
Go'aaminta waxyaabaha muhiimka ah iyo ujeedooyinka muhiimka ah ee alaabta maareynta.
In la dhiso xiriirka ka dhexeeya doorarka, hababka, cabbirka maareynta iyo natiijooyinka waxqabadka mashruuca.
Imtixaanka koorsada waa:
Foomamka - su'aalo kala doorasho badan
Shuruudaha - midna
Wadarta tira. su'aalaha - 75
Su'aalaha Tijaabada ah - 5
Calaamadinta - 35 (ama 50%)
Muddada imtixaanka: Saacadda 1
Nooca Imtixaanka - Buugan xiran
TALLAABADA II - Tababarka Tababarrada PRINCE2
Ka dib Tababarka Aasaaska, shahaadada tababarka ee PRINCE2 ayaa xaqiijinaysa in musharaxa uu ku guulaystay fahamka codsiga PRINCE2 mashaariicda dhabta ah. Iyadoo la raacayo jihada saxda ah, musharaxa ayaa awood u yeelan doona inuu ku dabaqo hababka wax loo bartay ee mashruuca hadda jira ee lagu guuleystay.
Ujeedooyinka barashada PRINCE2 qaar ka mid ah ayaa looga baahan yahay oo kaliya heerka dhaqtarka. Halka imtixaanka asaasiga ahi uu qiimeeyo aqoonta musharraxa ee mawduuca PRINCE2, mabaadiida, hababka iyo doorarka, Imtixaanka Dhaqtarka wuxuu qiimeeyaa hubaalkooda si ay u adeegsadaan habka PRINCE2 gudaha xaalad la soo sheegay.
Ka dib markaad ka takhalusayso tababarka iyo imtixaan qaadaha PRINCE, waxaad awood u yeelan doontaa inaad:
Abuuritaanka sharraxaad faahfaahsan dhammaan mawduucyada, mabaadiida iyo hababka leh tusaalooyin la xaqiijiyey ee dhammaan alaabooyinka PRINCE2 ee codsiga si wax looga qabto xaalad gaar ah.
Tilmaamidda fahamka xidhiidhka u dhexeeya mabaadiida, mawduucyada iyo hababka iyo sheyga PRINCE2 oo ay weheliyaan karti ay ku adeegsan karaan fahamkan.
Fahmidda ujeedada ka dambaysa mabaadiida, mawduucyada iyo geedi socodka iyo weliba fahamka mabaadiida ka dambeeya arrimahan.
Shuruudaha - PRINCE2 Foundation, PMP®, CAPM®, IPMA-D, IPMA-C, IPMA-B, ama IPMA-A
Nooca - Nooca ujeedada, 8 su'aalaha X 10
Calaamadaynta - 55%
Nooca imtixaanka - Buugga furan (buugga rasmiga ah PRINCE2)
Talooyin muhiim ah:
Ururinta walxo waxbarasho oo habboon. Websaytka rasmiga ee AXELOS waxay noqon kartaa caawimaad tan.
Isku day in aad xalliso warqad muunad ama labo si aad u falanqayso heerkaaga iyo fiilada tilmaamaya meelahaaga daciifka ah. Waxay sidoo kale kaa caawinaysaa inaad isticmaasho qaabka imtixaanka. Warqadda tusaalaha waxaa laga soo qaadan karaa bogga rasmiga ah ee AXELOS.
Nidaamyada ama tababbarrada lagu soo bandhigay ururkaaga hadda ma caawin karo. Markaa way ka sii fiicantahay inaad ku dhajiso hababka PRINCE2 halka aad ka jawaabto.
Waxay kugu caawinaysaa inaad xirfad u hesho.
Waxbarashada aasaasiga ah ee ITIL oo ka muuqda harada wabiga, Florida laga bilaabo 7 ilaa 9 bishii Agoosto
Waxbarashada ITIL Foundation Training 16th Sept. - 17th Sept.